किसानलाई २५ रुपैयाँमै ‘सेक्स सिमेन’ – Newsagro.com :
January 12, 2016 January 14, 2016 NewsAgro0Comments Agriculture, Cow, livestock, Moad कृषि विकास मन्त्रालय Ministry of Agriculture Development of Nepal, Nepal, Newsagro.com, sex simen
यो समाचार 441 पटक पढिएको
बाछी मात्रै जन्मिने
काठमाडौं / पालनमा गोरु र साँढेको उपयोगिता कम हुन थालेपछि सरकारले आगामी फागुनदेखि बाछी मात्र जन्मने बीर्य (सेक्स सिमेन) वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। प्रचुर परिमाणमा दूध उत्पादनका लागि बाछाभन्दा बाछी आवश्यक पर्ने भएकाले पशुपंक्षी मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले बाछी मात्र जन्माउन सेक्स सिमेन वितरण गर्न लागेको हो।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तका अनुसार बोर्डले बाछी मात्र जन्माउन आठ हजार मात्रा (डोज) वितरण गर्ने गृहकार्य थालेको छ । यसमा चार हजार होलेस्टेन फ्रिजन र चार हजार मात्रा जर्सी जातको गाईको हुनेछ।
उनका अनुसार सेक्स सिमेनको प्रतिमात्राको मूल्य दुई हजार सात सयदेखि तीन हजारसम्म पर्छ। तर, किसानलाई भने प्रतिमात्रा २५ रुपैयाँमा उपलब्ध गराइनेछ। ‘सेक्स सिमेन’ महँगो भए पनि हामीले एउटा किसानसँग २५ रुपैयाँ लिएर एक मात्रा उपलब्ध गराउँछौुं, बोर्डका कार्यकारी निर्देशक पन्तले भने। उनका अनुसार यो सिमेनको प्रयोग गरेर बाछी मात्रै जन्माउन सकिन्छ । बाछी मात्रै जन्मिएपछि दूध उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ।बोर्डले तीन वर्षअघि ६ सय मात्रा सेक्स सिमेन ल्याएर सफल प्रयोग गरेपछि अहिले आठ हजार मात्रा ल्याएर वितरण गर्न लागिएको हो।
पन्तले भने, ‘यसअघि हामीले ६ सय मात्रा ल्याएर परीक्षण गरेका थियौं। परीक्षणको क्रममा कुल मात्राबाट ९२ प्रतिशत बाछी मात्रै जन्मियो।’ सेक्स सिमेन वितरणका लागि बोर्डले गत महिनामा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । टेन्डरमा पाँच वटा आपूर्तिकर्ताले युरोप र अमेरिकाबाट ल्याएर उपलब्ध गराउने भनेर बोलपत्र बुझाएका छन्।
बोर्डका अनुसार जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ र राष्ट्रिय पशु प्रजनन महाशाखाको सहकार्यमा व्यावसायिक पशुपालक किसानलाई यो सिमेनको मात्रा वितरण गरिनेछ।नेपालमा वैज्ञानिकरूपमा गर्भाधान गरिने पद्धती कार्यान्वयनमा नआएकाले बाछा जन्मिने संख्या बढ्दो छ।
यसका कारण दूध उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन्। जनसंख्या वृद्धिसँगै नेपालमा पछिल्लो समयमा दूध उत्पादन हुने समयमा समेत दूधको अभाव हुन थालेपछि सरकारले दूध उत्पादनमा वृद्धि गर्न यो विधिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। नेपालमा बर्सेनि दूध उत्पादन चार प्रतिशतले बढेपनि खपत भने आठ प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको छ।
उनका अनुसार अन्य मुलुकमा गोरु र साँढेलाई मासुका रूपमा प्रयोग गरिए पनि नेपालमा धार्मिक आस्था तथा सामाजिक सद्भावका कारण गोरु र साँढे प्रयोगविहिन अवस्थामा छ। गोरुलाई खेत जोत्न तथा साँढेलाई गर्भाधान प्रक्रियाका लागि मात्र प्रयोग गरिँदैआएको छ । गाईले बाछा र बाछी करिब समान संख्यामा जन्माउने गर्छ।
‘नेपालमा बाछाको प्रयोग त्यति सारो छैनु,’ उनले भने, ‘पोथीसँग सहवास गराउने र खेत जोताउने बाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न नपाइने हुँदा बाछामा गरिएको लगानी व्यर्थ देखिएको छ। पोथीमात्रै जन्मिए त्यसले दूध उत्पादनमा प्रचुर परिमाणमा योगदान पुर्‍याउने भएकाले सेक्स सिमेन वितरण गर्न लागेका छौं।’
सेक्स सिमेनको सहयोगमा गाईलाई कृत्रिम गर्भाधान गराइनेछ। कृत्रिम गर्भाधान गराएको नौं महिनामा गाईले बाछी जन्माउन सक्षम हुनेछ । सेक्स सिमेनको प्रयोग गरी उत्पादन भएको गाईले दैनिक २५ लिटरसम्म पोषिलो दूध दिन्छ। सामान्य जातका गाईले भने १२ लिटर दूध दिने गरेको छ। आठ हजार मात्रा वितरण गरेपछि उत्पादन हुने बाछीको सहयोगमा आगामी तीन वर्षमा डेढ लाख लिटरसम्म दूधको उत्पादनमा वृद्धि हुने बोर्डले दाबी गरेको छ।
पशुउत्पादन निर्देशनालयका निर्देशक डा. बिमलकुमार निर्मलका अनुसार गाईमा ‘एक्स एक्स’ भनेर दुईवटा क्रोमोजोम हुन्छ। यस्तै साँढेमा ‘एक्स र वाई’ भनेर दुइवटा छुट्टाछुट्टै प्रकृतिको क्रोमोजोम पाइन्छ । साँढेको ‘वाई’ र गाईको ‘एक्स’ भन्ने क्रोमोजोम मिलेर बाछा जन्मिन्छ।सेक्स सिमेन पद्धतीअन्तर्गत जटिल प्रक्रियाबाट साँढेको बीर्यमा पाइने दुई छुट्टाछुट्टै क्रोमोजोममध्ये ‘वाई’ भन्नेलाई झिक्ने काम हुन्छ। ‘वाई’ भन्ने क्रोमोजोमलाई झिकेपछि साँढेको बीर्यमा ‘एक्स’ भन्ने र गाईको ‘एक्स एक्स’ भन्ने बीर्यलाई मिसाएर छुट्टै प्रकारका ‘सेक्स सिमेन’ तयार गरिन्छ। ‘यस्तो सेक्स सिमेनको सहयोगमा गाईलाई गर्भाधान गराउँदा ९५ प्रतिशतसम्म बाछी मात्रै जन्मिन्छ,’ डा. निर्मलले।
बोर्डका अनुसार बढी उत्पादन हुने कात्तिकदेखि माघसम्म ११ लाख लिटर दूधको माग हुन्छ । यसमध्ये आठ लाख ७५ हजार लिटर आपूर्ति हुँदै आएको छ। यस्तै कम उत्पादन हुने समय माघदेखि असोजसम्म ११ लाख लिटरको माग भए पनि ६ लाख ७५ हजार लिटर मात्र आपूर्ति हुन्छ। उत्पादनको अभावमा मागअनुसार दूध आपूर्ति गर्न दुग्ध विकास संस्थान तथा निजी क्षेत्रले महँगो मूल्यमा भारतबाट कच्चा र धूलो दूध आयात गर्दैआएका छन्।
← १० करोडको सुन्तला बिक्री
पावर टिलरमा एकै दिनमा सात करोड भ्रष्टाचार →
यो समाचार 35084 पटक पढिएकोबुटवल । रूपन्देही मत्स्य ह्याचरीमा आत्मनिर्भर बनेको छ । माछाको पकेट जिल्ला रूपन्देहीमा माछाका भुरा उत्पादनमा
यो समाचार 34697 पटक पढिएकोरासायनिक मल अनियमितता प्रकरण काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनीले लिमिटेडले कमिसनका लागि फेरि डीएपी मल खरिद
यो समाचार 26012 पटक पढिएको GM Food Crops Illegally Growing in India • By Colin Todhunter The GM Contamination Register database is run
यो समाचार 6756 पटक पढिएकोम्याग्दी, मङ्सिर १६ गते । जिल्लाका किसान यान्त्रिक हलोतर्फ आकर्षित भएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका किसानले